Maraoka: Lany Andro Ve Ny “Lanonam-panòavana” ? · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 01 Septambra 2012 1:03 GMT
Ny “bay'a” no anaran'ilay lanonam-panoavana fanao isan-taona izay hanambaran'ireo olo-manan-kaja “dignitaires” manerana an'i Maraoka ny fanoavany na ny fanekeny ny Mpanjaka Mohammed VI. nilaza ny mpitsikera [fr] fa “lanonana mahamenatra sy karazana efa lany daty izao,” ireo nankasitraka kosa nilaza fa mametraka fifanekena an'ohatra eo amin'ny vahoaka Maraokanina sy ny mpitondra izao.
Tamin'ny fiandohany, hetsika fanòavana izay ho mpandimby ny Mpaminany Mohammed ny bay'a. Nanambara ny Mpanjaka Maraokanina fa izy no taranaka [mpandimby] ny Mpaminany ary manana anjara fahefana avy amin'izany tetiarana masina izany.
Abdelilah Benkirane no praiminisitra am-perinasa. Taminà fanambarana nataony tamin'izy mbola tao anatin'ny mpanohitra, nofaritany ho toy “fomba mahamenatra’ sy “zavatra efa taloha” ny bay'a, izay niteraka resabe, hanapa-kevitra hanemotra ny lanonana amin'ity taona ity ve ny Mpanjaka?
Na dia teo aza ny fahadisoam-panantenana lehibe teo amin'ireo mpanohitra ny bay'a, tontosa tsara tamin'ny Talata 21 Aogositra teo ihany ny lanonana (lahatsary nalefan'i hespresslive):
Manaraka arofenitra henjana ny bay'a, izay manery ireo olona ambony sy olom-boafidy mampahafantatra ny tenany amin'ny Mpanjaka. Ny Mpanjaka, miakanjo ambony lokombolamena, mitaingina soavaly, arovan'ireo mpiambina manokana, voaharo amin'ny elo ihany koa izy, izay araka ny hevitry ny mpitsikera, fa mariky ny kosmokonika ny fanjakana. Miankohoka eo anatrehany arak'izany ireo olo-manan-kaja ka mivavaka mafy eo amin'ny sary vongany toy ny “lehiben'ny mpino Silamo (kalifa),” alohan'ny ialàna am-panajana.
Maro ireo manaraka ny hetsika ao amin'ny Twitter tahaka an'i OnlyZineb izay ni-tweet hoe:
Tao amin'ny Facebook, vahoaka maherin'ny 1,000 no nifanaiky hivory amin'ny Zoma, ny ampitson'ny bay'a, mba hanao “lanonana mendrika an-kalamanjana ho an'ny fahafahana sy ny fahamendrehana”.
Nahasosotra an'ilay mpamahana bolongana ihany koa ilay fombafomba, hoy i Labri nanoratra:
Reda nanohitra izany kosa. Hoy izy nanoratra [fr]:
Mikasika ny vaovao farany momba ny “lanonana” hafa karakarain'ireo mpikatroka eo anoloan'ny antenimiera Maraokanina, araho ny tenifototra #TwittoBayaa ao amin'ny Twitter.